Sizibandakanye neshishini lokwakha iglasi ukusukela ngo-2006
Inkxaso ye-imeyile info@yongyuglass.com
Inkxaso yeminxeba 0086-400-089-8280
Iglasi yeprofayili yeLABER® U
Inkqubo ephezulu yeglasi ye-U yokusebenza
Inkqubo yokuvelisa umbane weglasi ye-iron encinci
Icwecwe / i-Frosted / Low-E U yeglasi yeprofayile
Iglasi yodonga olungaphambili / lekhethini
Jumbo / iglasi yokhuseleko enkulu
Iglasi elaminethiweyo iDupont SGP
Iglasi yokhuseleko egobile
Iglasi Wobulali & elaminethiweyo iglasi
Iiyunithi zeglasi ezifakwe kwi-Low-E
Ukhuseleko lweglasi yokhuseleko kunye neengcingo
Iinkqubo zeglasi zerink
Ukhuseleko lweglasi yokhuseleko / iglasi yokubiyela iingcingo
Izahlulelo zeglasi yokhuseleko
Iglasi yeshawari yokhuseleko
Iglasi ye-Smart / iglasi yePDLC
Iglasi ecacileyo / ephantsi yentsimbi
Icwecwe / iglasi enomsindo
U Iglasi ekwi-Intanethi
Iimveliso eziphambili kunye neNkcazo
Iglasi yeProfayili yeLABER®
Olungaphambili / Curtain Wall Glass
Iglasi yoKhuseleko lweJumbo / eOversized
Iglasi eyi-Smart (iglasi yokulawula ukukhanya)
IDupont egunyazisiweyo yeglasi eSamintiweyo yeGlasi
Ngokusisiseko silungile kwi:
1) Ukhuseleko kwiglasi yeglasi
2) iglasi egobile wobulali kunye iglasi elaminethiweyo egosogoso;
3) ubungakanani iglasi ukhuseleko ubungakanani
4) Ibronzi, ngwevu emthubi, negrey enombala igolide
5) I-12/15 / 19mm iglasi enobushushu, icacile okanye icacile
6) Ukusebenza okuphezulu kweglasi ye-PDLC / SPD
I-7) iDupont egunyazisiweyo yeglasi ye-SGP elaminethiweyo
Yintoni iglasi yeprofayile ye-U / yeglasi yesiteshi?
Yintoni iglasi yeprofayile ye-U / yeglasi yesiteshi? Iglasi yeprofayile ye-U / iglasi yesitayile esiguqukayo esimile njenge-U eveliswe kububanzi obaqala kwi-9 ukuya kwi-19 ″, ubude ukuya kuthi ga kwi-23 yeenyawo, kunye ne-1.5 ″ (yokusetyenziswa kwangaphakathi) okanye i-2.5 ″ (yokusetyenziswa kwangaphandle) kweentsimbi. Iiflanges zenza iiglasi ezinemilinganiselo emithathu zizixhase, zivumele ukuba zenze izithuba zeglasi ezinde ezingaphazanyiswa ngezinto ezinesakhelo esincinci- ezilungele ukusetyenziswa kwemini. Iglasi yeprofayile yeglasi / yeglasi ye-U kulula ukuyifaka. An ...
Iglasi yoKhuseleko egobile / iglasi yoKhuseleko eBent
Ulwazi oluyisiseko Nokuba i-Bent yakho, i-Bent Laminated okanye i-Bent i-Glass efakwe i-Insulated i-Safety, i-Security, i-Acoustics okanye i-Thermal Performance, sinikezela ngeeMveliso eziMgangatho oPhezulu kunye neNkonzo yaBathengi. Iglasi enobushushu egobile / iglasi enobushushu egudileyo Ifumaneka ngobukhulu obuninzi, iimilo, kunye nemibala Iiradiyo ukuya kuthi ga kwi-180 degrees, iiradiyo ezininzi, min R800mm, ubude be-arc 3660mm, ubude be-12 yeemitha ezicacileyo, ubhedu opeyintiweyo, ngwevu, luhlaza okanye ziiglasi eziluhlaza. iglasi / Bent iglasi elaminethiweyo iyafumaneka kwi ezahlukeneyo c ...
Icwecwe kunye ne-Ceramic Frit kunye ne-Frosted-Low-E yeprofayile yeglasi / ye-U yeglasi yeglasi
Ulwazi olusisiseko lweThayile yeglasi ye-U yiglasi enombala eyacutha ukuhanjiswa okubonakalayo kunye nokuqaqamba. Iglasi enombala phantse ihlala ifuna unyango lobushushu ukunciphisa uxinzelelo olunokubakho lwe-thermal kunye nophuko kwaye ithambekele ekubuphatheni ngokutsha ubushushu obufunxwe. Iimveliso zethu zeglasi yeprofayile ye-U eza ngombala kwaye ihlelwa ngokudluliselwa kokukhanya. Kuyacetyiswa ukuba u-odole iisampulu zeglasi yokwenyani yokumelwa kombala okwenyani. Imibala yefrikhi yodongwe iyagxothwa kuma-650 degrees Celsius kwi ...
Ukhuseleko lweGlasi yoKhuseleko / iingcingo zePhuli yeGlasi
Ulwazi olusisiseko Gcina umbono kwidesika yakho kunye nedama licacile kwaye ungaphazanyiswa yinkqubo yokuThutha ngeGlasi. Iipaneli zeglasi ezipheleleyo / i-pool yocingo kwi-glass balusters, ngaphakathi okanye ngaphandle, ukufakela i-glass deck railing system yindlela eqinisekileyo yomlilo yokufumana ingqalelo kunye nokuzisa i-deck railing / pool fence ideas ebomini. Amanqaku 1) Isithambiso esiphakamileyo seSibheno seGlasi esikhulayo sinikezela ngenkangeleko yangoku kunye nexilongo kuyo nayiphi na enye inkqubo yokugcona esemgangathweni esetyenziswa namhlanje. Kubantu abaninzi, izinto zokubambelela ngeglasi zi ...
Igumbi lokuhlamba Iglasi yoKhuseleko
Ulwazi oluSisiseko Iglasi yeshawari enobushushu obushushu: Lawula imfihlo yakho ngokulula Ukusukela ngoku ukuya phambili, konke okudingayo kukucofa iswitshi ukwenza iminyango yeshawa yakho engafihliyo icace gca. Itekhnoloji yeglasi eyi-smart ibandakanyiwe kwiimveliso zethu ukukunceda utshintshe inkangeleko yazo kwimfuno. Nokuba ufuna ukufihla emehlweni akho okanye wenze ukukhanya okungakumbi kungene, kuya kufuneka ucofe eli qhosha. Ngeglasi yethu enobushushu yeendonga zokuhlamba kunye neminyango, imfihlo yakho ihlala ikhuselekile! Ngaba ujonge iglasi yoku ...
Cacisa / iglasi yentsimbi epholileyo yegumbi lokuhlambela
Ulwazi olusisiseko Masijongane nalo, umnyango weshawari ayingomnyango weshawa kuphela, lukhetho lwesitayile olubeka ithoni kwinkangeleko kunye nokuziva kwendawo yonke yokuhlambela. Yeyona nto inkulu kwindawo yakho yokuhlambela kwaye eyona nto itsala umdla. Ayisiyiyo loo nto kuphela, kodwa kufuneka isebenze ngokufanelekileyo nayo. (Siza kuthetha ngaloo nto ngomzuzu.) Apha eYongyu Glass, siyazi ukuba luhlobo luni lwempembelelo umnyango weshawa okanye ibhafu evaliweyo enokuyenza. Siyazi kwakhona ukuba ukhetha isitayile esifanelekileyo, ubume, kunye ...
Ulwazi oluSisiseko Iglasi elaminethiweyo yenziwa njengesandwich yeemakhishithi ezi-2 okanye ngaphezulu kweglasi yokudada, phakathi kwayo edityaniswe kunye ne-polyvinyl butyral enzima kunye ne-thermoplastic polyvinyl (PVB) phantsi kobushushu noxinzelelo kwaye ikhuphe umoya, emva koko uyibeke phezulu Ukucinezelwa kweketile yomphunga usebenzisa ubushushu obuphezulu kunye noxinzelelo oluphezulu ukunyibilikisa intwana encinci eseleyo yomoya kwinto yokugaya. ubungakanani: 3000mm × 1300mm egobile elaminethiweyo iglasi ilam egobile wobulali ...
Iglasi eyi-Smart, ekwabizwa ngokuba liglasi yokulawula ukukhanya, iglasi eguqukayo okanye iglasi yabucala, iyanceda ekuchazeni uyilo, iimoto, ingaphakathi kunye nemveliso yoyilo.
Ubukhulu: Nge-odolo nganye
Ubungakanani obuqhelekileyo: Ngokwe-odolo nganye
Amagama aphambili: Ngokwe-odolo nganye
Isicelo: Isahlulelo, igumbi lokuhlambela, ibhalkhoni, iifestile njl
Ixesha lokuzisa: iiveki ezimbini
Iglasi eyi-Smart, ekwabizwa ngokuba yiGlasi yokuTshintshana yaBucala, sisisombululo esinezinto ezininzi. Zimbini iintlobo zeglasi efanelekileyo, enye ilawulwa ngumbane, enye ilawulwa lilanga.
UkuSebenza okuPhezulu kwiProfayili yeGlasi / yeNkqubo yeGlasi yeGlasi
Ulwazi olusisiseko lweglasi yeprofayile U okanye iglasi yesitayile u-U ivela e-Austria. Ikwaveliswa ngaphezulu kweminyaka engama-35 eJamani. Njengenye yezinto eziqhelekileyo ezisetyenziswa kwiiprojekthi ezinkulu zokwakha, iglasi yeprofayile ye-U isetyenziswa kakhulu eYurophu naseMelika. Isicelo seglasi yeprofayile ye-U e-China isungulwe nge-1990s. Kwaye ngoku iindawo ezininzi e-China zisetyenziselwa uyilo olusekwe kwilizwe liphela. Iglasi yeprofayile yakho lolunye uhlobo lokuphosa iiglasi. Kuyinto inkqubela bokwakha ngo ...
Inkqubo ye-Glass encinci ye-Iron / U yeChannel yeNkqubo yokuGcina amandla eGlasi
Ulwazi olusisiseko lwepali yentsimbi ye-Glass eyenza izixhobo zokwakha iglasi (i-UBIPV) ngokudibanisa izibonelelo ze-U yokwakha iglasi kunye nenkqubo yokuvelisa amandla elanga ukukhuthaza ukhuselo lokusingqongileyo nokusindisa amandla kunye nokunciphisa ukungcola. I-UBIPV kunye nesixeko zinokudityaniswa ngokuvumelanayo ukwenza i-photovoltaic yinxalenye yobomi bomntu. Ayisiyonto yokwakha kuphela, kodwa inokufezekisa ukonga umbane kunye neenjongo zokuvelisa amandla, kwaye inokudityaniswa kunye ...
Umbono wethu kukwabelana ngezibonelelo zokuthelekisa ishishini lokwakha iglasi eTshayina kunye nabathengi, ukubonelela abathengi ngezisombululo ezingabizi mali, kunye nokufezekisa intsebenziswano yokuphumelela kunye nabathengi.
Amaxwebhu okuhambisa ngaphandle kweglasi yeSamrt
I-RFQ: Unyango kunye neglasi ekhethekileyo ye-U
Ungasifaka njani isahlulelo sangaphakathi seglasi
Uyilo lweglasi yoyilo loyilo
© Copyright - 2010-2020: Yongyu Glass Onke amalungelo agciniwe.